I-TV ye-Android ekhoyo nge-10% yeTV zeTV ezikwiimarike | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Iipesenti ezili-10 zeeTV ezikumabonwakude zisebenzisa i-Android TV
UEder Ferreño | | Ezinye izixhobo, Iinguqulelo ze-Android
I-TV ye-Android ibikunye nathi iminyaka embalwa ngoku. Nangona inkqubo yokusebenza kweethelevishini zikaGoogle ingazange igqibe ukuthatha ngendlela ebelindelwe ngabaninzi. Nangona inobukho obuhle kwihlabathi liphela, njengoko kuye kwaziwa ngamanye amaxesha. Ngoku, amanani amatsha ayenza icace kuthi ubukho benkqubo yokusebenza kwimakethi ye-smart TV.
Ukusukela ngoko sikwazile ukwazi ngala manani, I-10% yee-TV zeSmart kwimarike zisebenzisa i-Android TV njengenkqubo yokusebenza. Iindaba ezimnandi ezibonisa ukuba ithandwa kakhulu, ngaphandle kwemizamo embalwa kaGoogle malunga noku.
Kuba uhlaziyo olukhutshiweyo aluninzi kakhulu. Into engancediyo nokuba kukho abavelisi okanye abasebenzisi abanomdla kakhulu ekuthengeni umabonwakude nge-Android TV. Nangona i-10% isabelo esihle, ikude nezinye iimveliso ezinje Isamsung ine-21% yesabelo sentengiso.
Ukongeza, kufuneka kukhunjulwe ukuba eli candelo iseyinto apho kukho amathuba amaninzi. Njengoko sibonile kutsha nje ngeApple TV, ehlaziyiweyo, ukongeza ekungeniseni iqonga layo lokusasaza. Yintoni enokuba nefuthe kwinkqubela phambili ye-Android TV kwintengiso.
Kukho abenzi beTV abasebenzisa i-Android TV njengenkqubo yokusebenza kwiimodeli zabo. Iimpawu ezinje ngeSony okanye iHaier ineemodeli ezininzi ezikhoyo ngale nguqulo yenkqubo yokusebenza, ohlaziyo olunamaxesha athile ukongeza. Nangona abanye abaninzi bengakhethi inkqubo kaGoogle.
Ngaba unomabonakude one-Android TV? Ucinga ukuba yeyiphi inkqubo yokusebenza ekufuneka iphucule ukufumana isabelo esiphezulu kune-10% abanayo ngoku? Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba kanjani iqhubela phambili le nguqulo kwintengiso Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ukuba iyakwazi ukuba yimpumelelo njengoko bekulindelwe nguGoogle, okanye iqala ukuphulukana nomhlaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Iipesenti ezili-10 zeeTV ezikumabonwakude zisebenzisa i-Android TV
Amanqaku okumgangatho we-Master Lu u-Oppo Reno kunye ne-Snapdragon 855 kunye ne-8GB ye-RAM